HomeỤWAEurope30 GreeceNdị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-alụ ọgụ na Gris
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-alụ ọgụ na Gris
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 30 Greece, Europe, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General 0
ndị na-arụ ọrụ n'ụzọ ụgbọ oloko na-egbu mgbu
Megide Iwu ‘Democracy New’ nke gọọmentị, ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na Athens kwupụtara na ha ga-egbu 24 kwa oge.
Ndị ọrụ nke ụzọ ụgbọ oloko, tram, bọs na trolleybus na Athens kwupụtara na ha ga-esonye na oge iku ume 24 iji gosipụta usoro iwu gọọmentị 'Democracy Act' nke gọọmentị. Mgba a ga-eme na Tuesday na okporo ụzọ ụgbọ ala eletriki Kifissia-Piraeus (ISAP) na ọdụ ụgbọ njem ọha na eze.
N'otu ụbọchị ahụ, a ga-akụkwa ọka na mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, ndị ọrụ mmiri agaghị arụ ọrụ site na 6 na Tuesday ruo 6 na Wednesde.
Ndị isi ụgbọ mmiri ndị Gris ekwuputala na nso nso a na ha ga-amalite ọrụ. (haber.sol)
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè French na-akwadebe maka ụbọchị 36 02 / 04 / 2018 Na France, ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè SNCF 3 na-amalite ọrụ ọnwa na-arụ ọrụ ọnwa na Monday. Ndị ọrụ nke 3 dọrọ ndị France aka ná ntị na 77% nke ndị ọrụ ahụ ga-esonyere ya na Tuesday, na-ekwu na okporo ụzọ ga-emebi. N'ime ihe a na-akpọ "Nsogbu okporo ụzọ", ndị ọrụ nke nzukọ ahụ ga - ejide ọrụ 3 ụbọchị ọ bụla na - arụ ọrụ na ọnwa 36 ọzọ. Ndị ọrụ SNCF na-emeghachi omume na ụgwọ President Emmanuel Macron iji nyefee ụzọ maka privatization nke French railways. Macron chọkwara ịgbanwe ọrụ pụrụ iche nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè site na iwu. Ọ bụ ọrụ nkịtị, ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ n'abalị na izu ụka na-agbanwe ngwa ngwa.
Ndị na-ahụ maka ndị na-ebu ụgbọ njem na-achọ ịnwụ 08 / 05 / 2019 A na-egbochi ụgbọ okporo ígwè na-ebufe n'etiti ụgbọ okporo ígwè-İş Union, nke a na-ahazi na Park na otu mpaghara obodo-onye ọrụ ụlọ. Anyị nwere otu puku mmadụ nọ na Ụgbọ njem. Ọ bụrụ na anyị anabataghị ihe anyị chọrọ, anyị ga-egbu. " ỊNỤKWU ỤBỤRỤ Ụgwọ Ọrụ Alaka Ụlọ Ọrụ Center Adapazari Railway-Business Union Kocaeli Transportation Park Onye nnọchiteanya nke ọrụ ọrụ Halit Turan, onye ọrụ n'otu local-Sen kwuru na ha apụghị imebi. Turan zara ajụjụ nke akwụkwọ akụkọ anyị ma kwuo, sị: "Ihe anyị chọrọ bụ ezigbo uche na mmadụ. Ụgbọ njem Anyị nwere otu puku mmadụ na Park. Ụgwọ ọrụ anyị bụ ụgwọ kacha nta, ntụgharị 2020 TL. Tinyere uru ndị ọzọ na-elekọta mmadụ, ọnụọgụgụ 2 puku 750 ruru TL. Ihe anyị chọrọ bụ na ụgwọ ọrụ anyị bụ 3 ...
Ndị ọrụ okporo ụzọ na-akụ na France 13 / 06 / 2013 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na France Ndị ọrụ na-emegide ọrụ gọọmenti na-elekọta ndị mmadụ na-eme ka ha dịrị n'otu ụlọ ọrụ okporo ụzọ dị iche iche na mba ahụ. N'ihi iku ahụ, a na-atụ anya na ụgbọ njem ụgbọ elu dị elu ga-eme ka ọ gbọnwụrụ n'ala dum. Ulo oru uzo okporo uzo nke mba uwa ekwuputala na nani 10 ga-eje ozi site na 4 ngwa ngwa ụgbọ oloko echi n'ihi iku. N'ihi iku ahụ, ụgbọelu ndị France na-aga n'etiti Ịtali na Switzerland ga-agbagha ọkara. A naghị atụ anya na agha ahụ ga-emetụta ọrụ ụgbọ oloko dị elu site na France na Belgium na England. N'ihi iku ahụ, ụgbọ okporo ígwè dị n'agbata France na Spen ga-akwụsị.
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè nọ na France Na-aga 01 / 06 / 2016 Ndị na-arụ ọrụ okporo ụzọ na France Na-aga: Ndị ọrụ a na-ahazi iji mee mkpesa banyere iwu ọrụ mmanye iwu na France ma na-agbasa n'ime obodo taa, na-ekere òkè na ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè. Taa, ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-ekere òkè na ntiwapụ ndị a haziri na France iji katọọ mmegharị iwu iwu oru mmanye ma gbasaa n'ime obodo ahụ dum. N'ihi ụkọ mmanụ ụgbọala na mba ahụ na ndị ọrụ nụcha anụ na-aga agha, ndị mmadụ na-ahọrọ okporo ụzọ na-adịbeghị anya. Ndị agha na-ebuso mgbanwe ndị gọọmentị chọrọ ịme na iwu ọrụ ahụ agbasalarị n'ọdụ ụgbọ njem. Njikọ nke ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè emeela ka ndị njem na-eme njem. Ọtụtụ ụgbọ oloko na mpaghara ahụ emeela njem. Air France ụgbọelu Ikuku
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na Spain 01 / 08 / 2019 Na Spain, a kagbuola njem ụgbọ oloko 700 n'ihi nkuzi nke General Labour Confederation (CGT) nke ndị ọrụ okporo ụzọ so na ya. Ndị otu ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ọrụ (CGT) na --achọ mkpebi nke ihe dị ka ọnụego ego erughị ala, outsour na enweghị ndị ọrụ. Ekwuputara na 12.00, otu n'ime ụgbọ njem, njem, ụgbọ njem na ụgbọ elu dị elu na mba ahụ, kagburu mkpebi mkpebi nke ndị ọrụ ọrụ dị n'etiti 16.00 na 20.00 na n'etiti 24.00 na 700. General Business Confederation n'otu (CGT)…
Ememe Mwute na Mịnịstrị ndị nwụrụ n'ihe ọghọm ụgbọ ala na Bilecik
Göztepe Ümraniye Metro Line ọrụ bidoro ọzọ
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè French na-akwadebe maka ụbọchị 36
Ndị na-ahụ maka ndị na-ebu ụgbọ njem na-achọ ịnwụ
Ndị ọrụ okporo ụzọ na-akụ na France
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè nọ na France Na-aga
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Dutch na-akwadebe maka iku
Ndị ọrụ ỊZBAN Gaa n'ihu na Greve
Taa na akụkọ ihe mere eme: 14 September 1908 Anatolian na Oriental Railway ọrụ gara n'ihu ...
Taa na History: 14 September 1908 Anatolia na East Railway ọrụ na-egbu.
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Belgium na-eti mkpu